मानिसहरू किन आफ्नो मायालुलाई धोका दिन्छन् ?::Nepali News Portal from Nepal
मानिसहरू किन आफ्नो मायालुलाई धोका दिन्छन् ?
पुरानो पुस्ताका मानिसहरू नयाँ पुस्तालाई भनिरहेका हुन्छन् – आजकालको प्रेम के प्रेम, हाम्रो पालाको प्रेम पो प्रेम !उनीहरूको भनाइ प्रायः एउटै हुन्छ -आजकालकाहरू आज देख्यो, आजै प्रेम प्रस्ताव राख्छन्, भोलि डेटिङ जान्छन् र पर्सि ब्रेक-अप गरिहाल्छन् ।
तर, के तिनको भनाइमा सत्यता छ ? छैन भन्न मिल्दैन । आजकाल विवाह–इतर सम्बन्ध निकै बढेको देखिन्छ । प्रेमी र प्रेमिकाहरू पनि अरुसँगै भुलिरहेका हुन्छन् । भन्छन् नि – जहाँ गुलियो, उतै भुलियो !
एक अनुमान अनुसार, अमेरिकामा सन् १९९० यता प्रेमीप्रेमिका वा पती–पत्नीलाई धोका दिनेहरूको संख्या ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रेममा धोका सामान्य बन्दै गए पनि आखिर मानिसहरू किन आफ्ना प्रेमी-श्रीमान् वा प्रेमिका-श्रीमतीलाई धोका दिन्छन् त भन्ने कारणबारे चाहिँ धेरै अनभिज्ञ नै छन् ।
धेरैलाई लाग्छ- केटीहरू मायाका लागि ‘चिट’ गर्छन् त केटाहरू चाहिँ यौनका लागि ! तर, सेक्स थेरोपिस्ट तथा व्हेन यु आर द वान हु चिट्सकी लेखिका ट्याम्मी नेल्सनको भनाइ बेग्लै छ । उनी भन्छिन्, ‘यो किताबका लागि अनुसन्धान गर्दा पुरूषले कनेक्सनका लागि र महिलाले सेक्सका लागि धोका दिने गरेको पाएँ ।’
तर, सबैको हकमा एउटै कारण लागु हुँदैन । उनी भन्छिन्, ‘मानिस अनुसार विवाह–इतर सम्बन्धका कारण पनि फरक हुन्छ । कतिपयका लागि यो बोझिल सम्बन्धबाट बाहिर निस्कने बाटो पनि हुनसक्छ ।’
तपाईंले पनि आफूलाई माया गर्ने व्यक्तिलाई धोका दिइरहनुभएको छ वा धोका दिने बिचार गर्दै हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने इन्फेडिलिटी रिकभरी स्ट्रयाटजिस्ट रेनेल इ. नेल्सनको सल्लाह सुन्नूस् । उनी भन्छन् – यस्तो अवस्थामा आफैलाई सोध्नूस् – म किन यस्तो गर्दैछु ? अर्काे व्यक्तिसँग सम्बन्ध बढाएर के हासिल गर्न खोज्दैछु ?
अझै सोध्नूस्– यो कुनै क्षणिक आकर्षण मात्रै त होइन ? यसले मेरा सन्तान, परिवार र जीवनसाथीलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? विवाहलाई बचाए के हुन्छ ? पति वा पत्नीसँग फेरि सम्बन्ध गाँस्ने सम्भावना बाँकी रहन्छ कि रहँदैन ?
आफ्ना मायालुलाई चिट गर्ने व्यक्तिको मन भतभती पोलिरहन्छ । ग्लानि हुन्छ । आफ्ना सबै गोप्य कुरा उसका अगाडि खोलेर मन हल्का पारौजस्तो हुन्छ । तर, विज्ञहरू भन्छन् – आफ्ना मायालुलाई आफू अर्कैसँग लागेको बताउनु विवेकी कदम नहुन सक्छ ।
‘आत्मग्लानिबाट मुक्ति पाउन मात्रै आफ्नो अफेयरबारे बताउने इच्छा भए त्यस्तो नगर्न मेरो सुझाव छ,’ नेल्सनले भने । धोका पाएका पति–पत्नी वा प्रेमी–प्रेमिकासँग अफेयरबारे धेरै प्रश्न हुन्छन् । तर उत्तर सुनेर झन् तनाव बढ्ने सेक्स थेरापिस्ट सारी कुपर बताउँछिन् ।
उत्तर दिनुअघि ‘म सेवाग्राहीलाई अफेयर सम्बन्धी प्रश्नहरूको सूची बनाउन लगाउँछु,’ उनी भन्छिन् । ‘थेरापी अघि बढ्दै गएपछि र उनीहरूको प्रारम्भिक आक्रोश शान्त हुन थालेपछि, लागेको चोट निको पार्न थप सूचनाले कुनै सहयोग गर्छ कि गर्दैन भनेर उनीहरूले निर्णय गर्नसक्छन् ।’
एक पटक विश्वास चुँडिएको जोडीको विश्वास फेरि जगाउनुु सबैभन्दा महत्वपूर्ण तर कठिन काम हो । ‘अफेयरपछि केही सम्बन्धहरू बलिया भएका घटनाहरू सत्य हुन्,’ मनोवैज्ञानिक तथा सेक्स थेरापिस्ट र्‍याचेल निडल भन्छिन् ।
‘अफेयरपछि, पतिपत्नी वा प्रेमीप्रेमिकाले स्वस्थ संवाद गर्न सिक्न सक्छन्, एकअर्कासँग निकट र बढी इमान्दार हुनसक्छन् ।’ तर यसका लागि दुवैले केही कठिन काम गर्नुपर्छ । धोका वा विश्वासघातका यौन र भावनात्मक कारणबारे छलफल गर्नुपर्छ । अन्यथा, सम्बन्धमा लागेका घाउ पूर्ण रूपमा निको हुँदैन । त्यसबाट अघि बढ्न सकिँदैन ।
‘तर केही भने एकअर्काका आवश्यकता पत्ता लगाउने कठिन काम नगरी पुरानै अवस्थामा फर्कन चाहन्छन्,’ कुपर भन्छिन् ।
यसका लागि अपेक्षा गरेभन्दा लामो समय लाग्ने थेरापिस्ट डेब्रा फक्सले बताइन् ।
‘कसैलाई घर फर्किन ढिला भए, अकस्मात् ६ वा १८ वर्ष अगाडिको घटना सम्झिनु सामान्य हो,’ उनले भनिन्,‘विश्वासिलो हुन प्रयत्नरत ‘धोकेबाज’ लाई यसले निराश बनाउँछ । उनीहरू भन्न सक्छन् – के अझै पनि त्यही कुरा सम्झिरहेका छौ ?
तर ‘माफ गर, मैले तिमीलाई दुख दिएँ’ भनेर प्रतिक्रिया दिए ढाडस मिल्छ र ‘चर्काचर्की’ पर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।’
सम्बन्ध रहे वा नरहे पनि, अफेयरभन्दा पर सोंच्ने गाह्रो काम गरे दुवैलाई फाइदा पुग्छ । भविष्यमा त्यस्तो घटना दोहोरिन दिदैंन । धोका र विश्वासघातमा – धोका दिने र धोका पाउनेभन्दा ‘पर’ अर्काे कथा पनि हुन्छ । नतिजा जे भए पनि, दम्पत्तिहरू नै आफ्नो सम्बन्धको कथाबारे बढी जिज्ञासु हुन्छन् र उनीहरूले सिक्नुपर्ने पनि धेरै छ ।
(इयान कर्नर कपल्स थेरापिस्ट हुन् । याे लेख सिएनएनमा प्रकाशित उनकाे लेखमा आधारित छ ।)